Triveni Digital ၏ StreamScope MT-50 HDT ကို NewBay Media Product Innovation Award ဖြင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » NewBay မီဒီယာကုန်ပစ္စည်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆုချီးမြှင့် Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ StreamScope MT-50 HDT
Princeton, NJ - ဒီဇင်ဘာ 22, 2014 - Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် ယနေ့StreamScope® MT-50 HDT, ကုမ္ပဏီအသစ် Real-time DTV သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း tool ကို, NewBay မီဒီယာကနေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထုတ်ပြန်ကြေညာ အဆိုပါဆုပြိုင်ပွဲဂုဏ်ထူးတီဗီအစေခံရန် 2014 မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ထူးချွန်ထုတ်ကုန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယို, နှင့်ထုတ်လွှင့် / အွန်လိုင်းရေဒီယိုအသုံးပြုသူများသည်။ ဆုရရှိသူအယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု, နည်းပညာ၏ဖန်တီးမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းတန်ဖိုးကိုအပါအဝင်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပြည့်စုံတစ်စုံ, အပေါ်အခြေခံပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူတစ်ဦး panel ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
"ကျနော်တို့ကထုတ်လွှင့်ဖို့အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်ကိုရောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် NewBay မီဒီယာကနေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုနှင့်အတူ၏အကြောင်းခံရဖို့ဂုဏ်ယူနေကြတယ်" ဟု Ralph Bachofen မှာအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကဆိုသည် Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်။ "အရည်အသွေးမြင့်တီဗီန်ဆောင်မှုများအတွက်ကြီးထွားလာစားသုံးသူဝယ်လိုအားနှင့်အတူ, ထုတ်လွှင့်နေတဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကွန်ရက်အခြေခံအဆောက်အအုံဆီသို့ကူးပြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါကစိန်ခေါ်မှုကုန်ကျ-ထိရောက်စွာမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးအမှားများကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရှာတွေ့နေကြပါတယ်။ ယင်း၏အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေမှတဆင့် StreamScope MT-50 HDT, HD ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နဲ့ 10GigE interface ကို, စစ်ဆင်ရေးထုတ်လွှင့်ဖို့အသုံးပြုမှုပိုမိုထိရောက်မှုနှင့်ငြိမ်ဝပ်တတ်၏။ "
တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်း-ပထမဦးဆုံးထိုးထွင်းသိမြင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် featuring HD အင်တာဖေ့စ, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အရှိဆုံးပြည့်စုံ MPEG ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအင်ဂျင်နှင့် 10 GigE interface ကို, Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်'' s ကို StreamScope MT-50 HDT ဝန်ဆောင်မှု (QoS) ၏သာလွန်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာစဉ် site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဝေးလံသောနေရာများမှာမျိုးစုံ DTV သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရှာနေဖြစ်ကြောင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စံပြကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
အဆိုပါ StreamScope MT-50 HDT တစ် 17 လက်မအရွယ် 16 features:9အချိုး, 1920 × 1080 HD အားလုံးကြည်လင်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတွက်, ဗွီဒီယိုနှင့်အသံပုံစံငယ်များ, QoS နှင့်နည်းနည်းနှုန်းကိုဂရပ်များ, crosstab ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖော်ပြရန်ဖြစ်စေလက်ညှိုးသို့မဟုတ်ထိတွေ့ကလောင်အားဖြင့် swiped နိုင်မျက်နှာပြင် HD အရည်အသွေး။ ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားနဲ့တက်ဘလက်-type အမျိုးအစားကိရိယာ၏ကျွမ်းနှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်ပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့် HD ဒေတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာဘို့လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းမျက်နှာပြင်, အ StreamScope MT-50 HDT ပိုပြီးစျေးသက်သာသောအမှားအယွင်းများစီးနှင့်အစဉ်အဆက်ထက်ပိုမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းရန်ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ StreamScope MT-50 HDT အားဖြင့်စစ်ဆင်ရေး streamlining နှင့်အရင်းအနှီးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်အသေးအဖွဲ, ထုတ်လွှင့်တစ်ခုတည်းပုံစံအချက်ထဲမှာမျိုးစုံ DTV သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း tools များ၏တန်ခိုးနှင့်စွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။
အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင် www.TriveniDigital.com.
2013 အတွက်ဖြန့်ချိ NewBay မီဒီယာကုန်ပစ္စည်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆုပေးပွဲ NewBay မီဒီယာရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှု Award ဆုအကြောင်း, တီဗီ / လိုလားသူဗီဒီယိုနှင့်ရေဒီယို / အွန်လိုင်း audio ကစက်မှုလုပ်ငန်းအစေခံရန်ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ထူးချွန်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဆုရရှိသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူများနှင့်အကဲဖြတ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု panel ကရွေးချယ်နေကြတယ်အယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု, နည်းပညာ၏ဖန်တီးမှုကိုအသုံးပြုခြင်း, စျေးနှုန်းတန်ဖိုးနှင့်ထုတ်လွှင့်တီဗီ / လိုလားသူဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့် / အွန်လိုင်းရေဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်ပါဝင်သည်။
အကြောင်းအရာ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် သူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုဖို့ပိုကောင်းအစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ထုတ်လွှင့် enable ပြုလုပ်စနစ်များကိုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်'' s ကိုပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်နှင့် metadata စီမံခန့်ခွဲမှု, ဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်း, ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးအာမခံချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်များဟာသူတို့ရဲ့လွယ်ကူခြင်းအဘို့အကျော်ကြားဖြစ်ကြသည်။ ဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်နှင့်အလုပ်လုပ်, Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားစျေးကွက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ-compliant ချဉ်းကပ်လုပ်ကိုင်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.TriveniDigital.com.
အယ်ဒီတာများမှမှတ်ချက်: ရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်"သည်ပြီးပြည့်စုံသောကုမ္ပဏီအမည်အားကိုသုံးပါTriveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ "ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ကုမ္ပဏီအမည်များကိုအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/TriveniDigital/TriveniDigital-MT50-Touchscreen.jpg ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် StreamScope® MT-50 ပို့ဆောင်ရေး Stream အားသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း Tool ကို
audio အသံလွှင်း ကုန်ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကို StreamScope MT-50 HDT Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် 2014-12-22
ယခင်: သေတ္တာ & Barrel နှင့်အတူအားလပ်ရက်များတွင်အတ္ထုပ္ပတ္တိရဲ့လော်ရီ Rubin ကလက်စွပ်
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်း Teranex Update ကို 3.1 ကြေညာ